International SEO kacha mma
Mọnde, Jenụwarị 24, 2011 Fraịde, Machị 1, 2013 Douglas Karr
Might nwere ike ghara ichegbu onwe gị ma ndị na-ege gị ntị bụ mba ụwa n'oge a, mana ọ nwere ike bụrụ ihe ịchọrọ iji leruo anya. Ọganihu mba na weebụ na-arị elu na ọ nwere ike ịbụ ezigbo akụ maka ụlọ ọrụ gị iji gbasaa azụmahịa ya. Atọ nke ndị ahịa anyị na-ere ahịa mba ụwa ma anyị na-arụ ọrụ iji chọpụta usoro kachasị mma njin ọchụchọ. Nke a bụ ụfọdụ nchoputa:
gShiftLabs bụ ngwa ọrụ eji enyocha SEO ụlọ na mba ụwa.
Na ọnọdụ dị mma, ịkwado nke ọma na otu mba ị kwesịrị inwe ccTLD na-egosipụta site na mba (.co.uk, .fr, .de, wdg) nke akwadoro na obodo a mụrụ. Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị nhọrọ, jiri subdomains maka asụsụ ọ bụla, dịka se.domain.com, de.domain.com wdg.
Melite otutu Webmaster Ngwaọrụ akaụntụ nke ọ bụla ccTLD ma ọ bụ subdomain.
Hụ na ị gosiri asụsụ dị na ngalaba ahụ.
Dọrọ njikọ site na mba ahụ akọwapụtara.
Ndụmọdụ Google na mba n'ime mba. DNS mba ọzọ nwere ike inyere aka ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnabata mba ụwa.
Ọ bụrụ na ịnwere ụlọ ọrụ ofesi, gbaa mbọ gosipụta ọfịs ahụ na saịtị dị.
Adaberela na ntụgharị asụsụ akpaghị aka. Ọ bụrụ n’ịchọrọ n’ezie iru ndị na-ege ntị na mba ofesi, were olu mba ụwa sụgharịa ọdịnaya gị.
Tags: content Marketingmbaọchụchọ mba ụwamba ofesisearch engine njikarịcha